Tirada dadka ku nool Iowa ee leh COVID-19 ee dhintay ayaa kor u dhaaftay 4,000, iyada oo gobolka uu | KWIT
Tirada dadka ku nool Iowa ee leh COVID-19 ee dhintay ayaa kor u dhaaftay 4,000, iyada oo gobolka uu
By Halima Osman • Jan 6, 2021
Somali News 01.06.21
Tirada dadka ku nool Iowa ee leh COVID-19 ee dhintay ayaa kor u dhaaftay 4,000, iyada oo gobolka uu soo sheegayo in 61 qof oo dheeri ah ay dhinteen Arbacadii.
Degmada Woodbury, waxaa ka jiray 94 kiis oo cusub oo lagu daray wadarta tirinta kiisaska 24-kii saac ee la soo dhaafay in ka badan 12,500 wadarta kiisaska, 171 dhimasho ah iyo 16.8% heer wanaagsan. Heerka tijaabada ee 14-maalmood wuxuu ahaa 13.5% usbuuc ka hor.
Cudur cusub oo faafa oo faafa ee coronavirus oo laga helay shan gobol. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya inay u badan tahay inay sidoo kale ku taal Nebraska, inkasta oo aan weli la xaqiijin.
Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in culeyska cusubi uu quseeyo maxaa yeelay waxay u horseedi kartaa kororka isbitaalada la dhigo Nebraska.
Culayska cusub ayaa horseeday xirnaashaha qaran ee England, fayraskana waxaa lagu arkay California, Florida, New York, Georgia, iyo deriska la ah Colorado.
Xaakim heer federaal ah ayaa xukumay in magacaabista madaxweyne Trump ee dhir goynta hilibka ay tahay "kaabayaasha muhiimka ah" aysan caymayn doonin Tyson Foods oo ka imanaya sheegashada maxkamadda gobolka ee geerida khaldan ee ku xiran masiibada.
Iowa Capitol Dispatch ayaa ku warantay in shirkada weyn ee cuntada ay soo wajahday dacwado dhowr ah oo ay soo gudbiyeen hantida shaqaalaha dhintay.
Guud ahaan, dacwadahaasi waxay sheeganayaan been abuur been abuur ah iyo dayacaad weyn, iyagoo ku andacoonaya in shirkadu ay ku fashilantay inay si ku filan u ilaaliso shaqaalaheeda COVID-19 waxayna si khaldan u soo bandhigtay khataraha ka dhalan kara dillaaca gudaha warshadaha soo saara cuntada ee shirkada.
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu soo saaray casriyeyn ku saabsan sida loo qeybiyey tallaalada Pfizer iyo Moderna ee Gobolka Woodbury.
Deegaanka, talaalada waxaa loo sameeyaa kooxaha mudnaanta koowaad 1A ee daryeelka caafimaadka shaqsiyaadka iyo degganeyaasha iyo shaqaalaha muddada-dheer.
Xarumaha waxay bilaabeen helitaanka tallaalada iyada oo loo marayo Iskaashiga Qaranka ee Farmashiyaha 28-kii Diseembar.
Shaqaalaha daryeelka caafimaadku waxay u badan tahay inay sii ahaadaan kuwa ugu horreeya dhowrka toddobaad ee soo socda. Markii wejiyada cusub iyo tallaalku bilaabmaan, xafiisyada dhakhtarku waxay la xiriiri doonaan dadka u-qalma in la tallaalo.
Waxay noqon kartaa guga dabayaaqada illaa xagaaga 2021 ka hor inta aan tiro ku filan loo helin qof kasta oo ka tirsan dadweynaha.